Mandehandeha manan-tanjona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Avrily 2018 8:52 GMT
Vakio amin'ny teny 繁體中文, 简体中文, Italiano, Français, English
(Marihana fa efa tamin'ny volana Jolay taona 2008 ny lahatsoratra amin'ny teny Anglisy)
Nanatrika ny Fihaonamben'ny Global Voices tany Budapest, Hongria i Victoria Stodden, namana mpikaroka ao amin'ny Berkman Center for Internet and Society ary mpampianatra ao amin'ny Sekolin'ny Lalàna ao Stanford raha nampahafantatra ny sasany amin'ireo asa nataon'izy ireo nandritra ny taona lasa ireo solontena efatra avy ao amin'ny tetikasa Rising Voices. Nanasongadina manokana fanontaniana tonga ho azy tany amin'ny farany tao amin'ireo mpihaino izy: ‘ahoana no ahafahanay manampy?’
Stodden manoratra hoe:
Mety ho mahagaga ny valiny, na dia ankasitrahana hatrany aza ny vola, ny zavatra ilaina dia ny fahaiza-manao. Amin'ny ankapobeny, ny olona manana fahaizana momba ny fanomezana endrika habaka na fahaizana momba ny teknolojiam-baovao no afa-miditra sy miaraka amin'ny vondrom-piarahamonina bilaogera mandritra ny herinandro na tapa-bolana ary mampianatra ny olona amin'ny fanomezana endrika pejy habaka, mampiseho ny [entambarony=fahaizany] an-tserasera, amin'ny ankapobeny manohana ny olona amin'ny fampiasana solosaina … Ary nitranga tamiko ny fahafantarana olona maro mametraka ho zava-dehibe ny dia sy ny fianarana, izay samy mahay teknolojiam-baovao ary mahita fahafaham-po lehibe amin'ny fananana tanjona amin'ny dian'izy ireo. Azoko atao ny mampifandray anao amin'ireo olona mety hankasitraka ny fahaizanao, na azonao atao ny mifandray mivantana amin'ny Rising Voices.
Mandray anjara goavana ho amin'ny fahombiazan'ny Rising Voices ny olona tahaka an'i Stodden – izay mpanelanelana eo amin'ireo manana fahaizana teknolojia sy ireo mangetaheta hianatra amin'izy ireo. Ohatra amin'izany: ny foiben'ny Nari Jibon ao Dhaka, izay mampiditra ny fampahalalam-baovaon'olon-tsotra hanampy ny taranja kilasy: teny Anglisy, solosaina ary teny Bangla ho an'ny tanoravavy Bangladeshita. Maro amin'ny votoaty mahagaga novokarin'ireo bilaogeran'ny Nari Jibon no avy amin'ny fampiofanana noraisin'izy ireo tamin'ny atrikasa nokarakarain'ny vondrona bilaogera ambony sady malaza avy any Venezoelà, Kanada ary Etazonia.
Mamaritra ny fomba nitambaran'ireo vondrona mpirotsaka an-tsitrapo mpampiofana momba ny median'olon-tsotra ilay mpanorina ny Nari Jibon, Kathryn Ward. Nanomboka izany raha nanoratra momba an'i Shawn, Kanadiana mpikatroka manohitra ny fahantrana monina ao Dhaka sy mibilaogy ao amin'ny The Uncultured Project i Rezwan, tonian-dahatsoraty ny Rising Voices. Herinandro vitsivitsy taty aoriana, raha naharaka ireo bilaogy Amerikana Latina sasany aho, dia nahatsapa fa tsy monina any Dhaka i Kira Kariakin, izay manoratra tao amin'ny K-MINOS. Taorian'ny mailaka vetivety, vonona avy hatrany izy ary nanolotra atrikasa momba ny Flickr tao amin'ny foibe Nari Jibon. (Ataovy izay hahitanao ireo andian-tsariny mahatalanjona ahitana ireo bilaogera Nari Jibon). Mandritra izany, nahita momba ny tetikasa Nari Jibon tao amin'ny bilaogin'i Shawn i Shaina, mpianatra sôsiôlôjia ao amin'ny Oniversitem-panjakana ao Florida, ary mampianatra teny Anglisy ao amin'ny foibe izy ankehitriny.
Sambany nihaona izy efatra tamin'ny herinandro lasa ary tena nazoto tsy misy toy izany mba hametraka ny tetikasa bilaogy ao amin'ny foibe Nari Jibon. Fifaliana ny mamaky ny fomba fijerin'i Kira, Kathy, sy Shawn tsirairay avy.
Inona no azo atao mba handrisihana ity karazana tambajotra ity? Inona no azo atao mba hampifandraisana ireo mpandehandeha (mpitsidika firenena) manana fahaizana ambony mitady anjoria sy tanjona amin'ny tetikasa fanentanan'ny Rising Voices? Na dia misy aza tranonkala sasany, tahaka ny Idealist.org, izay natokana hampifandraisana ireo mpilatsaka an-tsitrapo mpandehandeha amin'ireo fikambanana tsy mitady tombontsoa ara-bola, matetika izy ireo no manondro ireo fikambanana tsy mitady tombontsoa ireo mba hamoaka lahatsoratra.
Fahafahana iray hafa ny manararaotra ireo tranonkala andraisana anjara mifantoka amin'ny fitsidihan-toerana toy ny Wikitravel, Dopplr, na ny Thorn Tree an'ny Lonely Planet, ary ny World 66. Amin'ny famoahana ny famariparitana ny tetikasan'ny Rising Voices ka hatramin'ny pejin'ny tanàna mifanaraka amin'ny tranonkalam-pitsidihan-toerana, misy ny fitomboan'ny herijika fa afaka hitarika atrikasa media vaovao ahafahana mampiditra karazan'olona betsaka araka izay azo atao ireo mpitsidika toerana manantalenta avo ireo. Satria tranokalan'ny fitsidiham-paritra malaza eo amin'ireo bilaogera sy ny mpankafy aterineto 2.0 ny Dopplr, nanomboka nametraka ‘torohevitra’ tao aho. Ohatra, rehefa manomana dia ho any Medellín ianao, ary mitady zavatra misy dikany kokoa ho atao fa tsy mijery fotsiny ny hosodoko malazan'i Botero, hahita ny soso-kevitro momba ny asa an-tsitrapo amin'ny tolakandro ho an'ny tetikasa HiperBarrio ianao.
Azo jerena ao amin'ny pejin'ny tetikasa ny toerana misy ireo tetikasa Rising Voices rehetra. Raha toa ianao na izay olona fantatra mikasa handray anjara sy hanao asa an-tsitrapo, mifandraisa aminay amin'ny alalan'ny takelaka fifandraisana ao amin'ny pejy momba izany.